Hotline Khabar | News Website लघुकथा : सत्ताकाे लय – Hotline Khabar
२८ आश्विन, २०७७ मा प्रकाशित
“मलाई घरकाे न घाटकाे बनाउने ?”
“धराेधर्म, कसम म तिमीलाई छाेड् सक्दिन !”
दुखकाे बेलामा मेराे प्रेमकाे पत्थर एकाएक पग्लियाे । हरेक सभामा मुनालाई मैले सहजै जवाफ फर्काएकाे थिएँ । किन कि उनीसँग भएकाे अधिकार मसँग थिएन । म अधिकारलाई उपयाेग एवं उपभाेग गर्ने महत्वाकाङ्क्षा मात्र राख्थेँ । उनकाे मप्रतिकाे प्रेम, दया, माया, स्नेह र सद्भाव भएकाे कारणले मैले धेरै नै अधिकारहरू पनि उनीबाट नै प्राप्त गरेँ ।
“आज त बिर्सनुभएकाे छैन नि ?”
विकल भएकाे बेलामा बाटाेमा मलाई लज्जाले निहुराउने गरी प्याच्च बाेलिदिन्थिन् । म छेउ लागेर सरक्क सर्थेँ र उदाहरण दिँदै उनकाे प्रेमिल सत्ताबाट म भुतुक्क हुन्थे । फकाउँदै गर्दा उनले फेरि वारेण्ट काट्थिन्। उनकाे याे शासनले म हैरान हुन्थेँ अनि सुस्केरा हाल्थे र मनमनै भन्थेँ ।
“गाई खाने मुना तिम्राे जीवनलाई हुर्काउँछु र सम्पूर्ण जीवन सुन्दर बनाउँछु।”
मेराे याे वाचाबाट विश्वस्त बनेकी मुनाले मलाई मेराे स्वार्थ पूरा गर्न दिई । उसले पनि मनदेखि नै विश्वास गरी । विश्वासकाे त्याे दिन म उसकाे राजा भएँ। जब मैले राजा भएकाे महसुस गरेँ ।
एकदिन म राजा भएकाे उपलक्ष्यमा मुना मलाई प्रेमिलताकाे भावले भन्दा उसकाे अधिकारकाे भावले मसँग सुखकाे माग गर्न आई । कसाे कसाे मेराे मुखबाट कुनै बेलाकाे दमित भएर बसेकाे पुरूषत्व दम्भ निस्क्याे ।
“पुरानाे सत्ता गयाे, नयाँ सत्तामा हरेक कुरा प्रतिस्पर्धाबाट हुन्छ है अब ।”
“पापिष्ट ! के मलाई तलाक दिने अब ?”
“हैन हैन सत्ता व्यवस्थापन गर्न खाेजेकाे !”
मुना नराम्ररी बीचमै चिच्याउन लागी । उसकाे हिजाेकाे प्रेमिल कथाहरू मेराे मानसबाट बिस्मृत हुँदै गयाे । मैले हिजाे अस्ति खाेकिदिएँ भने पनि डराएर भन्थी !
“दुख्याे हजुरलाई ? धेरै खाेक्याे भने क्षयराेग लाग्छ !”
उ यस्तै यस्तै भनेर चिन्तित हुन्थी । आज मलाई साेध्ने कारण उसमा देखिदैन थिए । म शानकाे जीवन बिताउँदै थिए । सत्ता सँग रमाउँदै थिएँ । मलाई माया, प्रेम र दया दिनेहरू अघिपछि अरू नै थिए । मलाई एकदिन मेराे अन्तर्यमा घाउ लगाउने गरी उसले सडकमा नारा लगाई ।
“सुम्पिएकाे अधिकारकाे मात फिर्ता गर ?”
उसकाे हृदयमा बिझेकाे अनधिकृत अधिकारकाे आश्वासनमा उ विरक्त थिई । चुपचाप बसिरहेकाे समयमा उसकाे मुखबाट पहिलाजस्तै प्याट्ट आक्राेस निस्क्याे ।
“सत्तालयकाे गाना !”
मेराे आँखामा हिजाेकाे जस्ताे उसप्रति कत्ति पनि भावुकता थिएन । बरू दमन गरिरहुँ जस्ताे लाग्दथ्याे । दिन बिराएर फेरि नारा लगाउँथी र मलाई हैरान पार्दै भन्थी ।
“सत्ताकाे लयका गीतमा मेराे चिरहरण ?”
रिटायर्ड भएका मान्छेहरूले बेला बेलामा समाचार पत्रहरूमा लेख लेखेकाे देखेर पढिरहेकाे थिएँ ।
“सत्ताधारीहरू स्वार्थी र निकै क्रुर हुन्छन् !”
‘तिम्रो मुटु’ ल्याइन् राधिकाले (भिडिओ)
सञ्चारकर्मी राधिका कँडेलले ‘तिम्रो मुटु’ बोलको गीत रिलिज गरेकी छन्। राधिकाले गाएको गीतमा अश्विन अधिकारीको शब्द तथा संगीत छ। गीतको…